जुवातासको नसाले बनायो उठिबास………. | Indrenionline.com
जुवातासको नसाले बनायो उठिबास……….
काठमाडौँ, २३ फागुन । पुख्र्यौलीघर म्याग्दी भई हाल गोंगबु बस्दै आएका ५० वर्षीय खम्म मगर अवकासप्राप्त ब्रिटिस–लाहुरे ९ब्रिटिस गोर्खा सैनिक० हुन् । अवकासपछिको जीवन समाजसेवामा खर्चिने उद्देश्यले नेपाल फर्किएका मगर यतिखेर समाजसेवामा नभई सङ्कटमा परेका छन् ।
साथीसङ्गीसँगको बाक्लो उठबसका कारण जुवाको लतमा फसेका मगरले जागिरे जीवनबाट प्राप्त गरेको अधिकांश सम्पत्ति गुमाइसकेका छन् । केही दिनअघि गोंगबुस्थित जुवाखालबाट समातिएका मगर त्यसअघि पनि तीन पटक पक्राउ परिसकेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मगरसहित पक्राउ परेका नौ जनालाई जुवा खेलेको आरोपमा पक्रिएको छ गोरखापत्रमा खबर छ। जुवाडेको साथबाट नगद नभई किलो भन्दा बढी मकैको गेडा र सिमीको दाना बरामद गरिएको छ । परिसर प्रमुख बसन्तकुमार लामाका अनुसार प्रहरीको आँखा छल्न र जुवा खेललाई सहज बनाउन नगदको सट्टा मकै र सिमी प्रयोग गर्छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित अबैध जुवाअखडाहरूमा नगदको सट्टा यस्तै गेडागुडी प्रयोग गरी जुवातास खेल्दाखेल्दै कतियय पूर्वब्रिटिस लाहुरे मगर जस्तै सङ्कटमा परेका छन् ।
“मैले पनि धेरै सम्पत्ति गुमाइसके,’’ प्रहरीसँगको वयानमा वाङ्गेलले भने, ‘‘क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश निशेध गरेपछि कोठा र फ्ल्याट लिएर जुवा अखडा सञ्चालन गर्नेहरू बढे ।’’ प्रहरीका अनुसार, जुवा अखडा सञ्चालनमा ‘नामुद’ कहलिएका वाङ्गेल खेल्ने भन्दा खेलाउन सक्रिय थिए ।
जुवा खेल्ने र खुलाउने गरेको अभियोगमा बारम्बार पक्राउ पर्ने गरेका पूर्वब्रिटिस लाहुरे खम्म र जोरपाटीका वाङ्गेल जस्तै जुवा खेलेर घरसम्पत्ति उडाउनेको नाम लामो छ । पक्राउपछि प्रहरीसँगको वयानका क्रममा उनीहरूले आफ्नो कथाव्यथा खोल्ने गरेको पाइएको छ । उपत्यकामा चोरी, डकैती लुटपाट र लागूऔषध ओसारपसारपछि पक्राउ पर्ने आरोपीमा पनि जुवाडे धेरै छन् । सहरको हरेक नयाँबस्ती, होटल, घर, गल्लीदेखि गाडीको शो–रुम र मोटरसाइकल वर्कसपमा मिनी क्यासिनो ९जुवा० सञ्चालन हुने गरेको भनाइ प्रहरीको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्लामा मात्र प्रत्येक महिना आठदेखि १२ वटासम्म जुवाअखडामा छापा मार्ने गरेको छ । जुवाअखडाबाट पक्राउ पर्नेहरू अवकासप्राप्त लाहुरे, घरजग्गा व्यवसायी, ठेकेदार, पुख्र्यौली सम्पत्ति भएका मध्यम् वर्गीय परिवारका सदस्य, पूर्वकर्मचारी र ब्यापारी छन् ।
जुवामा युवाभन्दा पाको उमेरका महिला–पुरुषको संलग्नता बढी नै देखिएको छ । परिसरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार, यो वर्षको बैशाखदेखि फागुन २० गतेसम्म १०८ स्थानमा सञ्चालित जुवाअखडामा प्रहरीले छापा मारेको छ ।
ती अखडाबाट ८२६ जना जुवाडे पक्राउ गर्नुका साथै एककरोड १४ लाख ८५ हजार रुपियाँ नगद बरामद भएको छ । त्यस्तै, करिब तीनसय गड्डी तास, नगदको रुपमा प्रयोग हुने मकै र सिमी लगायतका गेडागुडी करिब तीन किलो भन्दा बढी बरामद गरेको छ ।
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०८:५५
Previous: राजपाले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
Next: विप्लवका कार्यकर्ता माथी गोलि प्रहार , एकजना घाइते